Virgil van Dijk oo markii ugu horreysay xirtay maaliyadda Liverpool – ballan adagna ka qaaday jamaahiirta Reds | Ciyaarside.com
Virgil van Dijk oo markii ugu horreysay xirtay maaliyadda Liverpool – ballan adagna ka qaaday jamaahiirta Reds
Jan 1, 2018 - Aragtiyood
Virgil van Dijk ayaa markii ugu horreysay xirtay maaliyadda kooxda Liverpool ka dib markii uu maanta oo Isniin ah dhammeystiray heshiiska 75ta milyan oo ginni ku kacay ee uu kaga soo dhaqaaqay kooxda Southampton.
Daafaca reer Holland Virgil van Dijk ayaa noqday saxiixii ugu qaalisanaa taariikhda Liverpool ka dib markii uu usoo dhaqaaqay Anfield Road.
26 sanno jirkaan ayaan awoodi doonin inuu u ciyaaro kooxdiisa Reds kulanka galabta wajahayaan kooxda Burnley, laakiin wuxuu kulankiisii ugu horreeyey ee Liverpool safan doonaa ciyaarta wareegga seddaxaad ee FA Cup ay Liverpool ku wajaheyso Everton.
Virgil van Dijk oo la hadlay website-ka Liverpool ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyn kusoo biiro Liverpool, mana sugi karo inaan bilowdo cutub ciyaareedkeyga kooxdaan.
“Waxaan u maleynayaa in waxa ugu muhiimsan ay yihiin baaxadda kooxdaan, dhaqankeeda, ciyaartoyda, tababaraha iyo taageereyaasha oo ugu muhiimsan kuwaasoo special u ah kooxdaan.
“Rajadeydu waxay tahay inaan koobab kula guuleysto kooxdaan, waxaana heysanaa ciyaartooy wanaagsan kuwaasoo ka shaqeyn kara horumarka kooxdaan.”
Van Dijk ayaa haatan si rasmi ah saxaafadda loogu soo bandhigay isagoo xiran maaliyadda Liverpool, waxaana xusid mudan inuu Van Dijk Sabtidii daawanayey kulankii ay Reds guusha 2-1 ah ka gaartay kooxda Leicester City.